Vagadziri vefoni vanga vachirira pamusoro pehunhu hwa makamera avo 'advanced zoom sekupedzisira. Mamwe acho ari nani kupfuura mamwe, asi chokwadi chinotonhora chakaomarara ndechekuti malenzi madiki ekamera mbozha haakwanise kudzokorora ziso kunyangwe rakanakisa po-uye-kupfura. Kana iwe uchida zoom chaiyo, iwe unofanirwa kukwidza kumusoro kune chaiyo dijitari kamera.
Dambudziko nderekuti mafoni emafoni haanyatso "zoom" munzira yechinyakare - miviri yavo midiki mitete haina nzvimbo yeiyo zoom lens ine girazi rinofamba kuti igadzirise iyo yakatarisa kureba. Kunyangwe akawanda maseru anokwanisa kukupa iwe kwakatarisana kureba, mazhinji eanoshamisa "zoom" mune achangopfuura mafoni mafoni ingori epamusoro-megapixels sensors vachishandisa dijitom zoom. Mukukosha, ivo vari kushandisa kurongedza kwakanaka, uye nguva imwe software nyowani-yakavakirwa zooming inokatyamadza zvakanyanya, hapana imwe nzira yekurova iyo mhando yemhando inouya neakatsaurwa ekugadzirisa ekugadzirisa o inofamba magirazi lenzi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti, iwe uchinge wakanda yako Yekare Rebel kune yako iPhone, yakatsaurwa edhijitari kamera haina kumbomira kugadzirisa. Iye zvino unogona kuwana risingadhuri poindi-uye-kupfura kamera ine hombe zoom lens, kana inowirirana yepakati-renji isina girazi ine lenzi dzinochinjika, kana kutyora bhangi ine yepamusoro-kumagumo DSLR iyo inopfura isingatendeke vhidhiyo uye yakamira. Kune matani esarudzo, saka ngatitarisei akanakisa.
KweVatambi uye Avo vari pane bhajeti: Pini-uye-Bhowa Superzooms
Makomba-uye-ekupfura makamera anowanzo gadzirirwa kuve madiki uye ari nyore kushanda, aine malenzi asiri akareba kupfuura akajairwa emifananidzo lens. Asi pane chikamu chidiki chinonzi "superzooms" icho chinorongedza mune hombe lens yekupfura kure uchichengeta mutengo uri pazasi wemuviri wakazvipira + lens combo.
Budget Sarudza: Canon Powershot SX540 HS
Iyi ye2015 yemuenzaniso kubva kuCanon inogona kuwanikwa nekuda kwerwiyo, uye inotakura inokwezva ye42x Optical zoom. Kuenzaniswa negirazi rechinyakare, iyo inotangira pamakumi maviri neshanu kusvika kune yegumi nembiri 24mm, zvese-maziso. Iyo inogona kupfura 1200-megapixel shoti na yakasarudzika aperture renji 3.4-6.5 uye shutter inomhanyisa inosvika 1/2000 masekondi. Iyo kamera ine yakavakirwa-mukati, asi zvinosuruvarisa kuti iwe haugone kuwana yekuona pamutengo uyu-iwe uchafanirwa kunamatira kune yekumashure skrini. Inogona kupfura 60fps yakazara HD vhidhiyo uye inouya neWi-Fi yekuchinjisa mapikicha nyore nyore kune yako foni kana PC.
Best Budget Superzoom Kamera
Canon PowerShot SX540 Dhijitari Kamera w / 50x Optical Zoom - Wi-Fi & NFC Yakagoneswa (Nhema), 1 - 1067C001
Iyi isingadhuri Canon kamera ine zoom factor yakafanana neyekupenga 1200mm lens.
Akakwidziridza Sarudza: Sony CyberShot DSC-HX99
Kutenda kune kumwe kunoshamisa kweinjiniya, iyi diki samsamu kamsamu mune 24-720mm Optical lens mumuviri wekhamera isingatokure kupfuura pakiti remakadhi, uye zvakadaro neimwe nzira inowana nzvimbo yepop-up flash uye OLED digital viewfinder. Kana iwe uchida vhidhiyo, inogona kupfura 4K pane yakajairwa framerate kana kuidzora pasi kusvika ku120fps yeHD slow motion. Kunyangwe iri diki saizi, iine mabhatiri anobviswa (kune iwo marefu ekupfura mazuva) uye inogara yakajairwa SD kadhi. Nekukosha, iyo lens inosanganisa kugadzikana kwemaziso-chimwe chinhu chaunoda nehurefu hwakareba uye nemuviri mutete usingaremi.
Kwakanakisa Superzoom Kusimudzira
Sony DSC-HX99 Compact Dhijitari 18.2 MP Kamera ine 24-720 mm Zoom, 4K uye Touchpad - Nhema
Iyi nyowani Sony kamera inorongedza inoshamisa zoom lensi kuti iite mumuviri isina kukura kupfuura pakiti yemakadhi.
Kweimwe Nhanho Kumusoro Yakakwira-Magetsi Mafuta: Mirrorless Makamera
Mirrorless makamera anorongedza iyo yekugadzirisa simba simba uye lens-switching inoshanduka yeDSLR makamera mune madiki maforamu ayo asingade akaomarara girazi mashandiro eanotarisa. Izvi zvinoita kuti miviri nemalensi zvive zvidiki uye zvive nyore kufamba nazvo, asi zvisingaite senge poindi-uye-nhungirwa. Mirrorless makamera inhanho huru kumusoro kune vanotanga kutora mafoto, uye mamwe ane simba rakaringana zvekuti kunyange zvayakanakira senge ivo zvekufamba.
Oo, chimwezve chinhu: iwe unogona kucherechedza kuti zoom zvinhu zvemakamera pazasi, zvinoratidzwa mumamirimita, zvakadzikira zvakanyanya kupfuura izvo zveinodhura poindi-uye-pfuti pamusoro. Imhaka yekuti vanoshandisa hombe, yakakwirira-emhando lens uye yakakura ma digital sensors. Iyo fizikisi yeopikicha yekutarisa zvinoreva kuti iyo yakakura girazi rako, idiki yako zoom factor. Saka nepo iwo makamera ane simba kwazvo asingatakure iwo iwo akafanana eupenga zoom zvinhu, mhando yemifananidzo iwe yaunotora kure kupfuura izvo zvakadzika.
Budget Sarudza: Sony Alpha a6000 + 55-210mm lens
Sony's Alpha dzakateedzana ndidzo dzinotengesa zvakanyanya. Iyi yechinyakare modhi haina kurongedza zvese zvitsva, asi ichiri inonakidza, inokurumidza-kupfura shooter inoenderana neakasiyana siyana eE-makomo lenzi, uye iwe uchiri kugona kuwana zvitsva nemutengo mukuru. Inopfura mafuremu gumi nemasere pasekondi-yakanaka kumitambo yepfuti! -Kugadziriswa kukuru kwema megapixels makumi maviri nemana. Kune vanopfura vekuswededza, tinokurudzira iyo yakakosha 11-24mm Sony lens, iyo inowedzera huwandu hwekhamera neodha yekukura nemutengo mukuru. Zvakaoma kuwana zoom lens yakabatanidzwa nemuviri, asi iwe unogona kuwana combo packs neiyo kit lens (compact 16-50mm, yakanaka kune mifananidzo uye mamwe mapepa epedyo) mutengo wakasanganiswa wepakati.
Best Budget Mirrorless Kamera
Sony Alpha a6000 Mirrorless Digital Kamera 24.3MP SLR Kamera ine 3.0-Inch LCD (Nhema) w / 16-50mm Power Zoom Lens
Iyi Sony modhi ine makore mashoma, asi ichiri kuwanikwa zvakanyanya, uye haigone kurohwa kana iwe uchida kupinda mune inochinjika sisitimu ine diki tsoka uye mutengo.
Yakanakisisa Budget Mirrorless Zoom Lens
Sony E 55-210mm F4.5-6.3 Lens yeiyo Sony E-Mount Makamera (Nhema)
Iyi lens zoom yeiyo Sony's Alpha makamera inowedzera hurefu kune miviri yakasimba.
Kurudzira Sarudza: Canon EOS RP + RF 24-240mm lens
Kana bhajeti rako rinogona kutambanudza, saka ndizvo zvichaitawo sarudzo dzako. Iyi Canon modhi inoshandisa yakakura yakazara-chimiro sensor, sezvinoonekwa mune yakanakisa yakazara-yakakura DSLR kamera, ichiri kuuya iri inenge hafu yehukuru uye uremu. Iyo 26.2 megapixel sensor inogona kupfura pamapuranga mashanu pasekondi nehupamhi hwekuvhara kwe1 / 4000, iine ISO inokwira inosvika 40000 inoshamisa. kubvumira kupfura mune yakadzika mwenje. Canon inoshandisa maRF lenses kune yayo isina kamera kamera, asi ine adapter yebato rekutanga, kamera iyi inokwanisa kuwana huwandu hwakazara hweEF neEF-S lenses inoshandiswa pane yakazara-saizi DSLRs. Kune avo vari kutsvaga zvakanangana nekuswededza, tinokurudzira kubatanidza iyo EOS RP muviri neiyo RF-24-240mm lens. Iyo hombe imwe, asi yayo yakakura renji inogona kushandiswa mune chero mamiriro ezvinhu. Wedzera isingadhuri 50mm prime lens yekupfura mifananidzo uye yakaderera-mwenje zvimisikidzo.
Yakanyanya Kusimudzira Mirrorless Kamera
Canon EOS RP Yakazara Yakagadzika Mirror isina Vlogging Inotakurika Dhijitari Kamera ine 26.2MP Yakazara-Dhizaina CMOS Sensor, Wi-Fi, Bluetooth, 4K Vhidhiyo Kurekodha uye 3.0 ”Vari-angle Kubata LCD Screen, Mutumbi, Nhema,
Canon's EOS RP kamera ine simba zvinoshamisa uye inoshanduka, ichiri idiki zvakakwana kuti ifambe.
Yakanyanya Kusimudzira Mirrorless Zoom Lens
CANON Lens RF24-240mm F4-6.3 isUSM
Iyi compact lens kubva kuCanon ine inonakidza zoom range, ichiita kuti ive yakakodzera yemhando dzakasiyana dzekupfura.
Iko Kupera Kwakadzika: Yakazara-Yakakura DSLRs
Kana iwe wagadzirira makamera ane simba kwazvo kutenderedza, DSLRs achiri ako akanyanya kubheja. Aya makamera ane muviri wakakura anoshandisa yekare-fashoni kamera yekamera yekutarisa, asi zvinonyanya kukosha, inowirirana nemhando dzakasiyana-siyana dzemalensi nemakumi emakore esarudzo kubva kune vakuru vekutanga-bato uye vechitatu-bato vagadziri. Kana iwe uchida kuwana pro-level mapfuti, kana ingo dzidza izvo zvekutanga zvine kamuri yekukura yako Hardware nehunyanzvi hwako, DSLRs ndiyo nzira yekuenda.
Budget Sarudza: Canon Rebel T6i + Tamron 18-270mm lens
DSLRs inogona kupenga inodhura kupenga nekukurumidza, asi kana iwe uri mubhajeti, Canon's Rebel akateedzana ndizvo zvaunoda. Iyo Rebel T6i inorovera izvo zvekutanga maererano nemaitiro uye kutonga, iine mashoma ekuwedzera seWi-Ffi kugona, yakaburitsa-kunze LCD skrini, yakazvipira mic-mune chiteshi chevhidhiyo, uye HDMI kuburitsa. Iyo 24-megapixel sensor haisi chero chinhu chinoshamisa cheDSLRs, uye inogumira kune 1080p yevhidhiyo, asi iyo shutter inoenda pasi kusvika 1/4000 masekondi.
Iyo kit lens yeiyo T6i ndeye 18-55mm Trooper, asi kana iwe uchida refu renji pasina kumbobvira uchida kuchinjika kunze, tinokurudzira wechitatu-bato sarudzo. Tamron's 18-270mm lens ine akasiyana mashandisirwo pamutengo wakasimba pasina kuwedzera yakawandisa akawanda. Izvo zvinosanganisirawo emhando yemufananidzo kudzikama, chimwe chinhu chaungasatarisira padanho iri.
Yakanakisisa Budget DSLR
Canon EOS Rebel T6i Dhijitari SLR (Muviri Chete) - Wi-Fi Yakagoneswa
Iyi yekare Canon muenzaniso ichaita kuti utarise nyika yakaoma kwazvo yeDSLR kamera pamutengo webhajeti.
Yakanakisisa Budget DSLR Zoom Lens
Tamron 18-270mm F / 3.5-6.3 Di II VC PZD TS yeCanon APS-C DSLR Makamera (6 Year Tamron Limited USA Waranti)
Iyi inoshanduka Tamron zoom lenzi ine hombe zoom renji, uye zvinoshamisa kuti haina kudhura.
Kurudzira Sarudza: Nikon D610 + Nikkor 28-300mm lens
Kune yepakati-renji DSLR sarudzo, tarisa iyo Nikon D610. Iyi kamera inodhura zvakanyanya kupfuura sarudzo yebhajeti, asi iri pakati pezvakachipa pamusika kuwana hombe, yakapinza yakazara-furemu yedhijitari yemufananidzo. Izvo zvakakosha, kwete chete nekuda kwekuwedzera kwemhando yemufananidzo asi nekuti zvinowana iwe kuwana kune yakasarudzika sarudzo yemalensi: Nikon diki DX uye yakanyanya kujekesa, yemhando yepamusoro FX mutsara. Kuti utore mukana weizvozvo, tinokurudzira kubatanidza muviri weD610 neNikkor FX 28-300mm lens.
Iyi lens inoshandisirwa zoom inogona kubata chero chinhu chero pane chairo zuva rekupfura, asi iwe ungangoda kukanda mune yekutanga lens kune yakaderera-mwenje kana mapikicha. Nyaradzo yezvisikwa pane iyo S610 muviri inosanganisira inoshamisa compact dhizaini neyechipiri maseteni skrini, inopenga inokurumidza autofocus system, uye yakavakirwa-muWi-Fi yekubatanidza kune maPC kana nhare mbozha. Chinhu choga chaanoshaya mashandiro emavhidhiyo epamusoro-soro - ichiri kungogumira ku1080p, 60 mafuremu pasekondi
Yakanyanya DSLR Inosimudzira Kamera
Nikon D610 24.3 MP CMOS FX-Fomu Dhijitari SLR Kamera (Muviri Chete) (Yakagadzirwazve)
Iyi Nikon modhi iri pakati peinonyanya kutengwa neyakazara-chimeso senor.
Yakanyanya DSLR Zoom Inosimudzira Inosimudzira
Nikon AF-S FX NIKKOR 28-300mm f / 3.5-5.6G ED Vibration Kuderedza Zoom Lens ne Auto Focus ye Nikon DSLR Makamera
Iyi lenti yeNikkor ichaita kuti ubate shoti padyo kana kure, yakarongedzwa nemhando yepamusoro yegirazi uye inorwisa-vibration zvikamu.
Mari Hapana Chinhu Chinogona: Canon EOS 5d Mako IV + EF 70-300mm L yakatevedzana
Kune avo vane maakaundi emabhangi asingagumi uye vatsva kuzere-simba kutora mafoto, tinokurudzira Canon's EOS 5D Maka IV. Iyi yepamusoro-yekupedzisira, yakazara-furemu shooter ndiyo nzira inodhura kupfuura vazhinji vatengi vatsva vanoda kufunga. Asi iwo muviri wakadii: unorongedza 30.4 megapixel sensor, ISO inokwira kusvika zviuru makumi matatu nezviviri zvemashiripiti asingadhure, 32,000K kurekodha vhidhiyo, mafuremu manomwe pasekondi kupfura (kurova sarudzo zhinji dzeDSLR pamusika), uye Wi-Fi, NFC, uye GPS yakavakwa mukamera pachayo. Iyo 4D inokwanisa kubata yakachipa EF-S uye yakazara-furemu EF lenzi, uye isu tinokurudzira kukurudzira kunamatira kune yekupedzisira kana iwe uri kushandisa iyi yakawanda mari.
Kune mamwe mabonkers EF lenses evapfuri vemifananidzo kunze uko (mamwe acho anodhura kupfuura mota), asi isu tinokurudzira iyo EF 70-300mm L akateedzana kutanga kana iwe uchida hukuru hukuru hwekuswededza. Pair iyo neepfupi zoom kana prime lens kana iwe uchida kupfura zvakanyanya zvakare.
Yakanyanya Yakakwira-Mutengo DSLR
Canon EOS 5D Mako IV yakazara Chimiro Dhijitari SLR Kamera Yemuviri
Iyi inopenga kamera muviri unoibata zvese zvaunokanda pairi, kusanganisira mamwe ma lens epamusoro-soro munyika uye yakakwirira-kumhanya 4K vhidhiyo.
Yakanyanya Yakakwira-Mutengo DSLR Zoom Lens
Canon EF 70-300mm f / 4-5.6L IS USM UD Telephoto Zoom Lens yeCanon EOS SLR Makamera
Iyi L-Series lens inogona kuwana zoom shots iwe iwe chete yaakarota pane yako smartphone.
Kunyangwe Crazier DSLR Matenhere!
Kana bhajeti rako richizvibvumira, unogona kuenda kunyange kure pamalenses eDSLR. Iyi lens yeTamron inoenda kubva ku150mm kusvika ku600mm haina mutengo, uye inowanikwa munzvimbo dzakasiyana dzemitumbi kubva kuCanon, Nikon, uye Sony. Chekutanga-bato sarudzo inowanzo kuve yakanyanya mutengo: Sony ine lens 200-600mm yemakamera ayo asina girazi, Canon inotengesa 100-400mm yeiyo EF yakavakirwa gomo, Uye Nikon ane 80-400mm FX lens izvo zvine mutsindo. Kune mamwe akawedzera kujekesa uye zoom (isina-kufamba) lenzi, asi isu tiri kuenda kunzvimbo yemitengo nzira pamusoro pekusvikwa nevanhu vazhinji.
Ziva kuti, kune chero chinhu chinopfuura mazana matatu emakumi matatu, iwe uchazoda monopod kana katatu yekupfura. Sezvo zvichishamisa semazuvano masisitimu ekudzikamisa ari, ivo havagone kuita mashiripiti.
Kana iwe watove wakadyara mukamera brand iyo isina kutaurwa pamusoro, seOlympus, Fujifilm, kana Pentax, tarisa uchitenderedza pazvitoro zvemagetsi kana vanotengesa mafoto. Mazhinji acho anotengesa lenzi mumazizi nemafomati anokwikwidza.
Dual lens kamera kamera dzakatsanangurwa: Ndeapi mabhenefiti vs imwechete lensi makamera uye ndeapi akanakisa?